Yaa ka danbeeyay weerarkii lagu qaaday saldhiga Booliska ee Garowe - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Yaa ka danbeeyay weerarkii lagu qaaday saldhiga Booliska ee Garowe
Yaa ka danbeeyay weerarkii lagu qaaday saldhiga Booliska ee Garowe
Ciidamada weeraray saldhiga weyn ee Garowe ayaa watay gaari tikniko ah, waxayna xoog kula baxeen taliyihii hore ee ciidamada rugta dowladda hoose degmada Goroowe oo la xiray markii uu diiday xilka qaadis lagu sameeyay.
Mar kale ciidamada ayaa xoog kula baxay labo askari oo ka tirsanaa saldhiga oo loo xiray ku lug lahaanshaha weerarkii lagula baxay sarkaalka xilka qaadista diiday. Askarta saldhiga Garoowe weeraray ayaa kamid ahaa ciidamo Boolis ah oo dhawaan lagu soo tababaray xerada Xorgoble ee Qardho.
Ilaa iyo hadda Booliska Puntland kama aysasan hadlin falkan laghu weerara salhdiga Booliiska Garowe, xiriiro lala samaynay saraakiil ka tirsan Booliska Puntland ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan dhacdadan.